ဤစာမျက်နှာသည် အမှန်တကယ်အကြောင်းဖြစ်သည်- နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်မှုဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်မှု ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။ နယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော် ကုန်သွယ်မှု။ ဒေသတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ တန်ဖိုး သို့မဟုတ် ဈေးနှုန်းကွာခြားမှုများ/ Arbitrage နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်မှု- အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် “နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်ခြင်းသည် သင့်အား ပြည်တွင်းပြိုင်ဘက်များနှင့် ငွေကြေးများထက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စျေးကွက်များတွင် ကုန်သွယ်မှုပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် သင့်အား ကုန်သွယ်မှုရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးကိုလည်း ပေးဆောင်ပါသည်။ “ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား ဘောလုံး/ဘောလုံးအကယ်ဒမီ ပညာသင်ဆုများ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုများ
Corporate Treasury ဆိုတာ ဘာလဲ။
ဤဝဘ်စာမျက်နှာတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Corporate Treasury ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ၎င်းသည် အန္တရာယ်များ၊ ရန်ပုံငွေများ၊ အရင်းအနှီး၊ အရန်ငွေများနှင့် အရင်းအမြစ်အများစုကို ၎င်း၏ရေတိုနှင့် ရေရှည်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ကိုင်တွယ်ရန် တည်ထောင်ထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကော်ပိုရိတ်ဘဏ္ဍာရေးဆောင်ရွက်မှု။ ကော်ပိုရိတ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများ။ Corporate Treasury ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် ဤအရာများသည် တာဝန်ခံကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်... ဆက်ဖတ်ရန်
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်စည်အနာဂတ်ကုန်သွယ်မှုကော်မရှင်၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ ကုန်စည်အနာဂတ်ကုန်သွယ်မှုကော်မရှင်၏အဓိပ္ပာယ်၊ ကုန်စည်အနာဂတ်ကုန်သွယ်မှုကော်မရှင် မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်၊ CFTC ၏စည်းမျဉ်းများ၊ ရွေးချယ်မှုများနှင့် အနာဂတ်များ၊ အနာဂတ်နှင့် လဲလှယ်မှုများ၊ ကုန်စည်ဖလှယ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေစသည်ဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ derivatives စျေးကွက်ကို ဗဟိုအစိုးရအဆင့်ရှိ အေဂျင်စီတစ်ခုက ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ... ဆက်ဖတ်ရန်
စားသုံးသူစျေးနှုန်းညွှန်းကိန်း (CPI) ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်
ဤဝဘ်စာမျက်နှာတွင်၊ စားသုံးသူစျေးနှုန်းညွှန်းကိန်း (CPI) ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ဆွေးနွေးပါမည်။ ၎င်းသည် ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ ခြင်းတောင်းတစ်ခု၏စျေးနှုန်းသည် စားသုံးသူစျေးနှုန်းညွှန်းကိန်း (သို့မဟုတ် CPI) ဟုခေါ်သော စျေးကွက်အပိုင်းများသို့ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို ခြေရာခံသည့် အညွှန်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ CPI ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုသလဲ။ CPI ကို ဘယ်သူနဲ့ ဘာတွေ အကျုံးဝင်မလဲ။ အဓိပ္ပါယ်က… ဆက်ဖတ်ရန်
Contract For Difference (CFD) ဆိုတာဘာလဲ။
(CFD) ကို နိဒါန်းပျိုးခြင်း စျေးနှုန်းအတက်အကျသည် ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုအပေါ် အမြဲသက်ရောက်မှုရှိစေသော အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွာခြားချက်အတွက် စာချုပ် (CFD) သည် ဝယ်သူသည် မည်သည့်စျေးနှုန်းကွာခြားချက်တွင် လုပ်သင့်သည်ကို ဖော်ပြသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ ဤစျေးနှုန်းကွာခြားမှုသည် ပစ္စည်းတန်ဖိုးအတက်အကျကြောင့်ဖြစ်သည်။ CFD ကုန်သွယ်မှု၊ ကုန်သွယ်မှုစျေးကွက်နှင့် ဝယ်စျေးနှုန်း ဆွေးနွေးကြပါစို့။ … ဆက်ဖတ်ရန်
Collateralized Mortgage Obligation (CMO) ဆိုတာ ဘာလဲ
Collateralized Mortgage Obligation (CMO) အကြောင်း ပိုမိုလေ့လာရန် ဤပို့စ်ကို ဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ။ CMO အကြောင်း သိထားသင့်သည် ။ CMO နှင့် CDO အကြား တူညီမှုများ။ CMO နှင့် MBS နှိုင်းယှဉ်ချက်။ collateralized mortgage obligation (CMO) သည် အတူတကွ ထုပ်ပိုးပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံ ရောင်းချသော ချေးငွေများစွာကို စုစည်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမျိုးအစားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်… ဆက်ဖတ်ရန်
ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေ (BSA) ကဘာလဲ။
ဤပို့စ်တွင်၊ ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ (BSA) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း၊ ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ (BSA)၊ ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ၏ အရေးပါပုံကို လေ့လာပါမည်။ ထို့အပြင် သံသယဖြစ်ဖွယ် လုပ်ဆောင်ချက်အစီရင်ခံစာ (SAR) ပုံစံ 8300 ကို ဖြည့်စွက်ရမည့်အချိန်လည်း ဖြစ်သည်။ 1970 ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသည် ရာဇ၀တ်ကောင်များအား ၎င်းတို့၏ ဖုံးကွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ခဝါချခြင်းမှ တားမြစ်ရန် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ (BSA) ကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
Collateralized Debt Obligation ၏ အဓိပ္ပါယ်
ဤပို့စ်တွင် Collateralized Debt Obligation ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ Collateralized Debt Obligation (CDO)၊ CDO Procedures၊ CDO ၏ Structure နှင့် CDO ၏ နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများ A collateralized debt obligation (CDO) သည် ကြီးမားသော ချေးငွေများနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရောင်းချသည့် ပက်ကေ့ခ်ျတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငွေကြေးအမြောက်အမြားဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟောင်း Drexel Burnham Lambert... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Cryptocurrency, အမေးများသောမေးခွန်းများ - FAQs, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုများ
အရင်းအနှီး ထိရောက်မှု၏ အဓိပ္ပါယ်ကား အဘယ်နည်း
ဤဝဘ်စာမျက်နှာတွင်၊ အရင်းအနှီး ထိရောက်မှု၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ အဘယ်နည်း အချိုးအစား ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ၎င်း၏ ၀င်ငွေကို တိုးချဲ့ရန်နှင့် အမြတ်ငွေ မည်မျှရသည်ကို အရင်းအနှီး ထိရောက်မှု ဟူ၍ ကွဲပြားစေမည့် အချိုးအစားကို ဆွေးနွေးပါမည်။ startup များအတွက် Capital Efficiency ၏ အရေးပါမှု။ အရင်းအနှီးထိရောက်မှုတန်ဖိုး အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် အရင်းအနှီးအကျိုးဆောင်မှု အခြေခံအားဖြင့် အချိုး... ဆက်ဖတ်ရန်
လေလံဈေးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဘာလဲ။
ဤဝဘ်စာမျက်နှာတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လေလံစျေးနှုန်း၏အဓိပ္ပာယ်ကို ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်သည်။ လုံခြုံရေး၊ ပစ္စည်း၊ ကုန်စည်၊ ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် စာချုပ်တစ်ခုအတွက် တစ်စုံတစ်ဦးမှ ပေးဆောင်လိုသော ကုန်ကျစရိတ်အဖြစ် လေလံစျေးနှုန်းကို သတ်မှတ်သည်။ လေလံစျေးနှုန်း အမျိုးအစားများ။ လေလံဈေးကို ဘယ်လိုနားလည်မလဲ။ လေလံဈေး၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ဥပမာများကား စျေးဝယ်ခြင်း၏ လေလံဆွဲခြင်း... ဆက်ဖတ်ရန်
အရင်းအနှီးငွေများရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဘာလဲ။
ဤဆောင်းပါးတွင် “အရင်းအနှီးရန်ပုံငွေများ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ဘာလဲ” ဟူသော ခေါင်းစဉ်ကို ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ “အရင်းအနှီးရန်ပုံငွေ၏ အဓိပ္ပာယ်”၊ “အရင်းအနှီးရန်ပုံငွေ၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်”၊ “အရင်းအနှီးရန်ပုံငွေကုန်ကျစရိတ်”၊ “ဥပမာများအကြောင်း ဆွေးနွေးပါမည်။ အရင်းအနှီးရန်ပုံငွေ” စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အရင်းအနှီးရန်ပုံငွေများ၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်သည် ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အင်အားကို ချိန်ဆရန်၊ ၎င်း၏တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်… ဆက်ဖတ်ရန်
Crypto နှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွင် Bag Holder ၏အဓိပ္ပါယ်
ဤပို့စ်တွင်၊ "Crypto နှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အိတ်ကိုင်ဆောင်သူ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်" ခေါင်းစဉ်ကို ဆွေးနွေးပါမည်။ “အိတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူက ဘယ်သူလဲ”၊ “အိတ်ကိုင်ဆောင်သူတွေကို ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်စေသလဲ”၊ “ဆုံးရှုံးမှုကို မနှစ်သက်ခြင်းနှင့် စိတ်သဘောထားအကျိုးသက်ရောက်မှု” တို့ကိုလည်း ကြည့်ရှုပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် “sunk cost” ကဲ့သို့သော အခြားအရေးကြီးသောအကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးပါမည်။ Bagholder ကဘယ်သူလဲ။ … ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Cryptocurrency, ဘောလုံး/ဘောလုံးအကယ်ဒမီ ပညာသင်ဆုများ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုများ
International Settlement (BIS) အတွက် ဘဏ်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
ဤဝဘ်စာမျက်နှာတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Bank for International Settlement (BIS) ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ဆွေးနွေးပါမည်။ BIS သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငွေကြေးတည်ငြိမ်မှုကို အားပေးသည့် နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာ အခြေချနေထိုင်မှုများအတွက် ဘဏ်၏ ရည်ရွယ်ချက်များ။ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့် Fintech ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် နိုင်ငံတကာ အခြေချမှုများအတွက် ဘဏ် (BIS) သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုအတွက် အခြေခံရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
Automated Market Maker (AMM) ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
ဤဆောင်းပါးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိကအာရုံစိုက်မှုသည် အလိုအလျောက်စျေးကွက်ထုတ်လုပ်သူ (AMM) ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အပေါ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း၊ ငွေဖြစ်လွယ်မှုအစု၊ ငွေဖြစ်လွယ်မှုပံ့ပိုးပေးသူများ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်ကုန်များအတွက်ဖော်မြူလာ၊ အလိုအလျောက်စျေးကွက်ထုတ်လုပ်သူများ၏ပြောင်းလဲမှုများ၊ မတည်မြဲသောဆုံးရှုံးမှုစသည်တို့ကိုလည်း လေ့လာကြည့်ရှုပါမည်။ အမည်တွင်ဆိုသည်အတိုင်း၊ ငွေဖြစ်လွယ်မှုကိုပေးဆောင်ရန် အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်အသုံးပြုခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ အဲဒါ… ဆက်ဖတ်ရန်
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီးပွားရေးအေးဂျင့် (AEA) ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီးပွားရေးအေးဂျင့်များ၏အဓိပ္ပါယ်၊ AEAs ၏အဓိပ္ပာယ်၊ AEA မူဘောင်၊ နောက်ဆုံးထွက်ရှိသောမူဘောင်နှင့် အခြားအရာများ။ Fetch.ai နှင့် IOTA ဖောင်ဒေးရှင်းမှ စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များအတွက် ၎င်း၏ပိုင်ရှင်ကိုယ်စား ဆုံးဖြတ်ချက်များချပေးကာ ပြင်ပသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှ ကင်းစင်သော အသိဉာဏ်ရှိသော အေးဂျင့်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီးပွားရေးအေးဂျင့် (AEA) သည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဒေတာကို စီမံဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ဆောင်ချက်များအား… ဆက်ဖတ်ရန်
Secured Overnight Financing Rate (SOFR) ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
ဤနေရာတွင်၊ Secured Overnight Financing Rate (SOFR) အမျိုးအစား၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အကြောင်း သင်သိလိုသမျှကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။ Secured Overnight Financing Rate (SOFR) အမျိုးအစား၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် Secured Overnight Financing Rate ၏ နောက်ခံနောက်ခံ။ Secured Overnight Financing Rate အကူးအပြောင်းကိစ္စများနှင့် အခြားအရာများ။ SOFR ၏ အဓိပ္ပါယ် (Secured Overnight Financing Rate)? ဒါက စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပါ… ဆက်ဖတ်ရန်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင် အန္တရာယ်ပရီမီယံ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
ဤအရာသည် စွန့်စားမှုကင်းသော ပြန်အမ်းနှုန်းထက် ပိုနေသော ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုမှ အထွက်နှုန်းကို မျှော်လင့်ထားသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှု၏အန္တရာယ်ပရီမီယံသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် လျော်ကြေးပေးသည့်ပုံစံတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင် အန္တရာယ်ပရီမီယံ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ စွန့်စားပရီမီယံနမူနာ၊ စွန့်စားပရီမီယံကြေးငွေ အသုံးချမှု။ ၎င်းသည် ပေးထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုတွင် အပိုအန္တရာယ်ကို သည်းခံခြင်းအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား ပေးချေခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုများ
ဝက်ဝံဈေးကွက်အတွက် အကောင်းဆုံး ဗျူဟာများကား အဘယ်နည်း။
ဝက်ဝံဈေးကွက်သည် အန္တရာယ်ရှိသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝက်ဝံဈေးကွက်အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာများဖြစ်သည့်အရာကို မီးမောင်းထိုးပြပါမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်၏ကြောက်ရွံ့မှုများကို ထိန်းချုပ်ထားရန်၊ ဒေါ်လာစျေးကို ပျမ်းမျှအားဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်း၊ အသေကစားခြင်း၊ ကွဲပြားခြင်းနှင့် အခြားအရာများကို ဖော်ထုတ်ပါမည်။ ဝက်ဝံဈေးကွက်ဆိုသည်မှာ ပိုင်ဆိုင်မှုစျေးနှုန်းများ အနည်းဆုံး 20% ကျဆင်းခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်... ဆက်ဖတ်ရန်
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ချေးငွေ-ပြန်ပေးထားသော လုံခြုံရေး (CMBS) ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်။
ဤဆောင်းပါးတွင်၊ စီးပွားဖြစ် ပေါင်နှံထားသော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ (CMBS) ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ၎င်းအလုပ်လုပ်ပုံ၊ စီးပွားဖြစ် ပေါင်နှံထားသော ငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ပုံ၊ CMBS အမျိုးအစားများ၊ CMBS အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် CMBS အတွက် အရည်အချင်းစစ်တို့ကို မီးမောင်းထိုးပြပါမည်။ ၎င်းတို့သည် လူနေအိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းအစား စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အိမ်ခြံမြေများကို ပေါင်နှံခြင်းဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသည့် ပုံသေဝင်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။ CMBS သည် အမှန်တကယ် ငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်သည်... ဆက်ဖတ်ရန်
စစ်ဘက်မိသားစုများအတွက် အကောင်းဆုံးနှင့် အမြတ်အစွန်းရနိုင်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကား အဘယ်နည်း။
ဤဆောင်းပါး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ မီးမောင်းထိုးပြရန်ဖြစ်သည်။ စစ်ဘက်မိသားစုများအတွက် အကောင်းဆုံးနှင့် အမြတ်အစွန်းရနိုင်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကား အဘယ်နည်း။ Federal thrift အစီအစဉ်ကဲ့သို့၊ တစ်ဦးချင်းအငြိမ်းစားယူသည့်အကောင့် (IRAs)၊ 529 ကောလိပ်ငွေစုအစီအစဉ်များ၊ စုဆောင်းအပ်ငွေအစီအစဉ်နှင့် အခြားအရာများ။ စစ်မှုထမ်းခြင်းသည် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအား သုတေသနပြုပြီး အကောင်းဆုံးသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ရွေးချယ်နိုင်စေမည့် အားလပ်ချိန်များစွာကို မပေးနိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီမှာ… ဆက်ဖတ်ရန်
နှစ်သက်ရာစတော့ရှယ်ယာနှင့် ဘုံစတော့များကြား ကွာခြားချက်
ဤဆောင်းပါးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဦးစားပေးစတော့ရှယ်ယာများနှင့် ဘုံစတော့များကြားတွင် ကွဲပြားသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဦးစားပေးစတော့ခ်များနှင့် ဘုံစတော့နှင့် ဦးစားပေးစတော့များကို ကွဲပြားစေမည့်အရာကို မီးမောင်းထိုးပြပါမည်။ Preferred stock နှင့် common stock ကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ကွဲပြားပါသည်။ အဓိကကွာခြားချက်မှာ ဦးစားပေးစတော့များသည် အစုရှယ်ယာရှင်များအား မဲပေးခွင့်မပေးဘဲ ဘုံစတော့ရှယ်ယာများ ပေးဆောင်နေချိန်ဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ… ဆက်ဖတ်ရန်
ဘဏ်လုပ်ငန်းတွင် Clearinghouse ၏အဓိပ္ပါယ်နှင့် ၎င်းအလုပ်လုပ်ပုံ (Clearinghouse နမူနာများ)
Financial Clearinghouse သည် လူလတ်တန်းစားအဖြစ် ထမ်းဆောင်သောကြောင့် စတော့ဈေးကွက်တွင် အရေးကြီးသော အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤပို့စ်ကိုဖတ်ခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် ငွေကြေးရှင်းလင်းရေးဌာန၏ သဘောတရားကို နားလည်ရုံသာမက၊ ကဲ့သို့သော ငွေကြေးရှင်းလင်းရေးဌာန အမျိုးအစားများကိုပါ သိရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ Futures Exchanges Clearinghouses နှင့် Stock Market Clearinghouses များ။ ကျွန်တော်တို့လည်း ဆွေးနွေးသွားမှာပါ… ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား ဘောလုံး/ဘောလုံးအကယ်ဒမီ ပညာသင်ဆုများ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုများ, Uncategorized
ဤဆောင်းပါးတွင်၊ အရင်းအနှီးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ အရင်းအနှီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ဆောင်ပုံများ၊ အရေးကြီးသောထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများနှင့် အရင်းအနှီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ အားနည်းချက်များကို ဖော်ပြပါမည်။ ၎င်းကို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ၎င်း၏ရေရှည်လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်ကို မြှင့်တင်ရာတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရယူခြင်းဟု သတ်မှတ်နိုင်သည်။ အရင်းအနှီးအဖြစ် ဝယ်ယူသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် အိမ်ခြံမြေ၊… ဆက်ဖတ်ရန်
နှစ်စဉ် ရာခိုင်နှုန်း အထွက်နှုန်း (APY) ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
Annual percentage Yield အကြောင်း ပိုမိုသိရှိရန် သင်စိတ်ဝင်စားပါသလား။ နှစ်စဉ်ရာခိုင်နှုန်းအထွက်နှုန်း (APY) ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ကြည့်ပါ။ APY အတွက် ဖော်မြူလာ။ APY နှင့် APR ကွာခြားချက်။ APY က ဘာပြောလဲ။ APY ၏ဥပမာ။ ဤအပိုင်းကို လမ်းညွှန်အဖြစ် ယူပါ။ နှစ်စဉ်ရာခိုင်နှုန်းအထွက်နှုန်း (APY) သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုအပေါ်တွင် ပြန်အမ်းနှုန်းဖြစ်သည်... ဆက်ဖတ်ရန်
Bull Market အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာများကား အဘယ်နည်း
နွားဈေးဆိုတာ ဘာလဲလို့ တွေးဖူးရင်၊ Bull market သည် ငွေကြေးဈေးကွက်တွင် စျေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာခြင်း သို့မဟုတ် မြင့်တက်လာရန် မျှော်မှန်းထားသည့် အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ “နွားဈေးကွက်” ဟူသော စကားလုံးသည် အများအားဖြင့် စတော့ဈေးကွက်နှင့် ဆက်စပ်နေသော်လည်း အိမ်ခြံမြေ၊ ငွေချေးစာချုပ်များ၊ ငွေကြေးများနှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု အပါအဝင် ရောင်းဝယ်သည့် မည်သည့်အရာနှင့်မဆို အသုံးချနိုင်သည်။ နွားသိုးစျေးကွက်အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာများကား အဘယ်နည်း၊ နွားဈေးကွက်၏အင်္ဂါရပ်များ၊ နွားဈေးကွက်မှ မည်သို့အကျိုးအမြတ်ရနိုင်သနည်း၊ နွားဈေးနှင့် ဝက်ဝံဈေးကွက်ကြား နှိုင်းယှဉ်ချက်။ … ဆက်ဖတ်ရန်
Financial Literacy ကို တိုးတက်စေဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်တွေက ဘာတွေလဲ။
သင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ တတ်မြောက်မှုကို မြှင့်တင်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ အဘယ်နည်းဟု သင်ထင်သနည်း။ သင်သည် အခွန်အကာအကွယ်ပေးသည့်ဗျူဟာများ၊ အသေးစိပ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် HSAs များမှ ETFs များကို ခွဲခြားရန်ခက်ခဲသည့်အချိန်ရှိသော်လည်း၊ အခြေခံများကိုလေ့လာရန်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည့် အရင်းအမြစ်များကို သိရှိရန် နှစ်ခုစလုံးလိုအပ်ပါသည်။ တိုးတက်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်တွေက ဘာတွေလဲ... ဆက်ဖတ်ရန်
Brokerage Account နှင့် IRA ၏ ခြားနားချက်များနှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်။
ခေါင်းစဉ်ကိုဆွေးနွေးသောအခါတွင်ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်မည့်အဓိကအကြောင်းအရာများရှိသည်- ပွဲစားအကောင့်နှင့် IRA ၏ကွာခြားမှုများနှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်။ ဤအဓိကအကြောင်းအရာများမှာ ပွဲစားနှင့် IRA ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်၊ ပွဲစားအကောင့်၏အဓိပ္ပာယ်၊ IRA ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း၊ ပွဲစားနှင့် IR အကောင့်များကို အခွန်ကောက်ခံခြင်း၊ ပွဲစားအကောင့်အခွန်များ၊ IR အကောင့်အခွန်အခများ၊ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွှေရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွက် အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းရွှေရောင်းဝယ်သူများသည် အဘယ်နည်း
စတော့ဈေးကွက် မတည်ငြိမ်မှုနှင့် နိုင်ငံရေးမရေရာမှုများ တိုးလာပြီးနောက်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ အများအပြားသည် ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အစုစုကို တိုးမြှင့်ရန် နည်းလမ်းအဖြစ် အဖိုးတန် သတ္တုများကို အမျိုးအစားခွဲကြသည်။ အထူးသဖြင့်၊ ရွှေသည် မှတ်သားဖွယ်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်အတက်အကျများအတွင်း၌ပင် ၎င်း၏တန်ဖိုးကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို ထိရောက်စွာကာကွယ်ရန် သရုပ်ပြခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းရွှေရောင်းဝယ်သူများသည် အဘယ်နည်း။ ဆက်ဖတ်ရန်
အငှားအိမ်ခြံမြေများအတွက် ထိပ်တန်းစာရင်းကိုင်ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် သင့်ငှားရမ်းမှုများကို စီမံခန့်ခွဲရန် အကောင်းဆုံးကိရိယာကို ရွေးချယ်နည်း
နေ့စဉ်ပစ္စည်းများကို မှတ်တမ်းထားရှိရန်၊ ပြေစာများကို ခြေရာခံခြင်း၊ အစီရင်ခံစာများဖန်တီးခြင်းနှင့် အခွန်ရာသီအတွက် မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ပြင်ဆင်ခြင်းများကို နာရီ (သို့မဟုတ်) ရက်များအစား ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဆော့ဖ်ဝဲလ်မှ စာရင်းကိုင်ဆော့ဖ်ဝဲဖြင့် ရရှိနိုင်သည်။ အငှားအိမ်ခြံမြေများအတွက် ထိပ်တန်းစာရင်းကိုင်ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် သင့်ငှားရမ်းမှုများကို စီမံခန့်ခွဲရန် အကောင်းဆုံးကိရိယာကို ရွေးချယ်နည်း၊ ငှားရမ်းမှုအတွက် စာရင်းကိုင်ဆော့ဖ်ဝဲက ဘာလဲ… ဆက်ဖတ်ရန်
Institutional Investors နှင့် Retail Investors အကြား ကွာခြားချက်ကဘာလဲ
မတူညီသော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းသည် မတူညီသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အမြဲဆွဲဆောင်ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ အဓိကအမျိုးအစားများမှာ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဖြစ်သည်။ Institutional Institutional Investors နှင့် Retail Investors အကြား ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် မည်သူနည်း။ လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေက ဘယ်သူတွေလဲ။ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ အမျိုးအစားများ Institutional Institutional Investors နှင့် Retail Investors များအကြား နှိုင်းယှဉ်ခြင်း Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional Institutional ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတို့သည် အခြားသူများကိုယ်စား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသော ဝန်ထမ်းများနှင့် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်ဆံပါသည်။ (ပုံမှန်အားဖြင့်၊ အခြားကုမ္ပဏီများနှင့် အဖွဲ့အစည်း)။ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ်ဦးမှ အရင်းအနှီးခွဲဝေပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန်မှာ ကုမ္ပဏီ၏ ရည်မှန်းချက်များ သို့မဟုတ် ၎င်းကို ကိုယ်စားပြုသည့် အဖွဲ့အစည်းများအပေါ် မူတည်ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ လူသိများသော အမျိုးအစားအနည်းငယ်မှာ ပင်စင်ရန်ပုံငွေများ၊ ဘဏ်များ၊ အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများ၊ အကာအကွယ်ရန်ပုံငွေများ၊ ထောက်ပံ့ကြေးများနှင့် အာမခံကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် အများအားဖြင့် ၎င်းတို့၏ကိုယ်စား ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အရင်းအနှီးကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများတွင် ပါဝင်ကြသည်။ ရိုးသားစွာပြောရလျှင် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့် လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကြား အရေးကြီးသော ကွာခြားချက်များ။ အရောင်းအ၀ယ်တစ်ခုစီ၏ နှုန်းပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ကုန်ကျစရိတ်… ဆက်ဖတ်ရန်
Market Economy နဲ့ Command Economy ကွာခြားချက်ကဘာလဲ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် စျေးကွက်စီးပွားရေးနှင့် ကွပ်ကဲမှုစီးပွားရေးသည် အဓိကစျေးကွက်စီးပွားရေးနှစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ စျေးကွက်စီးပွားရေးဆိုတာဘာလဲ၊ ကွပ်ကဲမှုစီးပွားရေးဆိုတာဘာလဲ၊ စျေးကွက်စီးပွားရေးနဲ့ ကွပ်ကဲမှုစီးပွားရေး ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။ စျေးကွက်စီးပွားရေးနှင့် ကွပ်ကဲမှုစီးပွားရေးကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအချက်များနှင့် အဓိကကွာခြားချက်များမှာ ... ဆက်ဖတ်ရန်
Index Funds နှင့် ၎င်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများတွင် ရင်းနှီးမြှပ်နှံပုံ
ဤဆောင်းပါး၏တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်မှာ အညွှန်းကိန်းရန်ပုံငွေများနှင့် ၎င်း၏အကျိုးခံစားခွင့်များတွင် မည်ကဲ့သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမည်ကို လမ်းညွှန်ရန်ဖြစ်သည်။ ညွှန်းကိန်းရန်ပုံငွေများ၏ စိန်ခေါ်မှုများ၊ ညွှန်းကိန်းရန်ပုံငွေများ၏ အားသာချက်များ၊ ညွှန်းကိန်းရန်ပုံငွေများ၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်၊ Warren Buffett ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း၊ စသည်ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြောင်း ဆွေးနွေးရာတွင် အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များ ရှိပါသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
ဤဆောင်းပါးကိုရေးသောအခါ၊ သင့်အတွက်အွန်လိုင်းငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် အမြတ်အစွန်းအရှိဆုံးနည်းလမ်း၏အသိပညာကို အကျိုးသက်ရောက်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ အွန်လိုင်းပွဲစားရွေးချယ်မှု၊ ဘုံအမှာစာအမျိုးအစားများ၊ အွန်လိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသုတေသန၊ two-factor authentication။ ကဲ စလိုက်ကြရအောင်။ မကြာသေးမီအချိန်များတွင်၊ ပမာဏအလွန်အကျွံအွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းများရှိသည်။ ဒါက ခက်ခဲစေတယ်… ဆက်ဖတ်ရန်
Modified Internal Rate of Return (MIRR) နှင့် ၎င်းအလုပ်လုပ်ပုံ အဓိပ္ပါယ်
MIRR ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် MIRR တွက်ပုံသေနည်းအကြောင်း ပိုမိုနားလည်ပါ။ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။ MIRR က ဘာပြောမလဲ။ MIRR နှင့် IRR အကြား ကွာဟချက်။ ပြုပြင်ထားသော ပြည်တွင်းပြန်နှုန်းသည် အဘယ်အရာကို ဆိုလိုသနည်း။ MIRR သည် ပြန်လည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှုန်းကို ခန့်မှန်းကာ အကောင့်အတွင်းပြန်အမ်းငွေ (IRR) ၏ ပြောင်းလဲထားသောဗားရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
Tax Lien Investing အတွက် အကောင်းဆုံး သင်တန်းတွေက ဘာတွေလဲ။
Tax Lien Certificate များသည် ငွေသားဖြင့် ပြန်လည်ပေးဆောင်သည့် ရက်လွန်အိမ်ခြံမြေအခွန်များကို ငွေသားဖြင့် ပြန်လည်ပေးဆောင်သည့် လိုင်စင်တစ်ခု ရရှိထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ အခွန်သက်သာခွင့်လက်မှတ်များသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အတိုးနှုန်းနည်းသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အထွက်နှုန်းကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ Tax lien ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု သင်တန်းဆရာ၊ လုပ်ငန်းစဉ် မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ စမတ်ကျသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ပြုလုပ်သည်နှင့် ... ဆက်ဖတ်ရန်
ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပစ္စည်းများ စျေးကွက်အတွက် အကောင်းဆုံး ဝဘ်ဆိုဒ် 21 ခု။
သင့်ပစ္စည်းအချို့ကို ရောင်းချခြင်းဖြင့် အပိုငွေရှာရန် ကြိုးစားနေပါက၊ ၎င်းတို့ကို လှူဒါန်းနိုင်ပါသေးသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင်သည် အမှန်တကယ် ငွေစုနိုင်ပြီး တတ်နိုင်သော ပြောင်းရွှေ့မှုတစ်ခု ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤသည်မှာ သင်ပြည်တွင်း၌ သင့်မလိုလားအပ်သော အရာများကို ရောင်းချပေးမည့် အကောင်းဆုံး ဝဘ်ဆိုက်နှင့် အက်ပ် 21 ခုဖြစ်သည်။ 1. Craigslist- eBay မတိုင်ခင်လေးမှာ Craigslist… ဆက်ဖတ်ရန်
Crypto တွင် နှစ်စဉ်ရာခိုင်နှုန်းနှုန်း (APR) ၏အဓိပ္ပါယ်
နှစ်စဉ်ရာခိုင်နှုန်း (APR) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ဤသည်မှာ ငွေချေးသူမှ နှစ်စဉ်ပေးဆောင်ရမည့် အတိုးပမာဏဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် အဓိကမေးခွန်းမှာ APR တွက်ချက်နည်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏လျှောက်လွှာတင်သည့်နှစ်တွင် ကာလအပိုင်းအခြားအလိုက် အတိုးနှုန်းကို မြှောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ နှစ်စဉ်ရာခိုင်နှုန်း (APR) သည် နှစ်စဉ်နှင့် ကွာခြားသည်... ဆက်ဖတ်ရန်
Visa Gift Card ကို အချိန်တိုအတွင်း ဘဏ်အကောင့်သို့ လွှဲပြောင်းရန် အကောင်းဆုံးရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းများ
Visa Gift Card ကို အချိန်တိုအတွင်း ဘဏ်အကောင့်သို့ လွှဲပြောင်းရန် အကောင်းဆုံးရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းများကို သင်မေးနေပါသလား။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဤအချက်အလက်အတွက်အဖြေကိုကြည့်ပါ။ လူအများအပြားသည် ဘဏ်များသို့ ဗီဇာလက်ဆောင်ကတ်များ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းသည် အလွန်ခက်ခဲပြီး အချို့သောလူများအတွက်ပင် မရနိုင်သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဗီဇာကတ်များ၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို အလေးပေး၍ မရပါ။ ဆက်ဖတ်ရန်
စာအုပ် ၀င်ငွေ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် နှင့် ၎င်း၏ အမှုတွဲအသုံးပြုမှုများ (စာအုပ် ၀င်ငွေ နှင့် အခွန်ဆောင်ရမည့် ၀င်ငွေ)
စာအုပ်ဝင်ငွေဆိုတာဘာလဲ။ အခွန်မထည့်မီ ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာရေးဝင်ငွေကို စာအုပ်ဝင်ငွေဟုခေါ်သည်။ (GAAP) သည် ယေဘူယျလက်ခံထားသော စာရင်းအင်းနိယာမတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကော်ပိုရေးရှင်းသည် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ၊ အစုရှယ်ယာရှင်များ သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းတစ်ခုတွင် အစီရင်ခံပါသည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အသားတင်ဝင်ငွေကို အခွန်လျှော့ချလိုက်ခြင်းသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဆက်စပ်နိုင်သည်... ဆက်ဖတ်ရန်
Bid-Ask Spread ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဘာလဲ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မလေ့လာမီ၊ Bid-Ask Spread သည် မည်သည်ကို အမြန်ရှင်းလင်းလိုက်ကြပါစို့။ Bid- Ask Spread သိခြင်း။ Bid-Ask Spread နှင့် Liquidity အကြား ဆက်စပ်မှု။ Bid-Ask Spread ၏ အစိတ်အပိုင်းများ။ ကျယ်ပြန့်သော လေလံအမေးအဖြေ ပျံ့နှံ့ရခြင်း အကြောင်းရင်းကား အဘယ်နည်း။ Bid-Ask Spread သည် Stocks တွင် မည်သို့ရှိသနည်း။ Bid-Ask Spread Definition ပေးသောပမာဏသည်… ဆက်ဖတ်ရန်
ထိရောက်သော နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်းက ဘာလဲ (ဥပမာများနှင့် နှစ်စဉ်ညီမျှသောနှုန်းကို တွက်ချက်နည်း)
ဤအကြောင်းအရာအပေါ် အတက်အဆင်း လုပ်ဆောင်ခြင်း၏ တသမတ်တည်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို လိုက်နာပါ။ ဤဆောင်းပါးသည် သင်၏ဖတ်ရှုမှုနှင့် နားလည်မှုအတွက် အကျိုးရှိမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပါ။ ထိရောက်သော နှစ်အလိုက် အတိုးနှုန်း (EAR) ကို မည်ကဲ့သို့ တွက်ချက်မည်နည်း။ ထိရောက်သောနှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း၏အဓိပ္ပါယ်။ ထိရောက်သော နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်းကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း။ Nominal Interest Rate ၏ အဓိပ္ပါယ်။ အမည်ခံနှင့် ထိရောက်မှု နှစ်မျိုးလုံးအတွက် စိတ်ဝင်စားမှု The… ဆက်ဖတ်ရန်
ဤဆောင်းပါးသည် ချက်လက်မှတ်ဟူသည် အဘယ်နည်း၊ ချက်လက်မှတ်ကို မည်သူပိုင်နိုင်သနည်း၊ ချက်လက်မှတ်ကို မည်ကဲ့သို့ ရေးရမည် စသည်ဖြင့် သင့်အား သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ ချက်လက်မှတ်အသုံးပြုမှုမှာ တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ်သွားသည်ဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း သိရှိရန် လိုအပ်နေသေးပါသည်။ ချက်လက်မှတ်ကို ဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲ။ ပိုင်ဆိုင်တဲ့လူအများစုက… ဆက်ဖတ်ရန်
အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသော ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ဘာလဲ (AUA)
စီမံအုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းက စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ဆောင်မှုများကို တပ်ဆင်ပေးသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏအားလုံးကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပြီး အလုပ်ပြီးမြောက်ရန်အတွက် အခကြေးငွေကောက်ခံခြင်းဖြင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသော ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ဘာလဲ (AUA) AUA နှင့် AUM နှိုင်းယှဉ်။ အုပ်ချုပ်မှုအောက်ရှိ ပိုင်ဆိုင်မှု ပံ့ပိုးပေးသူများစာရင်း စီမံခန့်ခွဲရေးအောက်တွင် ဤပိုင်ဆိုင်မှုများကို အများအားဖြင့် အကျိုးရှိရှိနှင့် သက်ဆိုင်သော စီမံကွပ်ကဲမှုဖြင့် ပိုင်ဆိုင်သည်... ဆက်ဖတ်ရန်
ကုန်သွယ်မှု ဂျာနယ်၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
ဤဝဘ်စာမျက်နှာတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ရောင်းဝယ်ရေးဂျာနယ်၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အပြည့်အစုံနှင့် အရောင်းအ၀ယ်ဂျာနယ်၏ အကျိုးကျေးဇူးများ၊ အရောင်းအ၀ယ်ဂျာနယ်၏ အကျိုးကျေးဇူးများ၊ ထိရောက်သောကုန်သွယ်မှုဂျာနယ်ကို ထားရှိနည်း၊ ကုန်သွယ်မှုတွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် အရေးကြီးသောဒြပ်စင်များကို ဖော်ပြပေးပါမည်။ ဂျာနယ်လား? ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးဖို့ ပိုလွယ်တဲ့နည်းလမ်းတော့ မရှိပါဘူး... ဆက်ဖတ်ရန်
Walmart ခရက်ဒစ်ကတ် အကောင့်ဝင်ခြင်းနှင့် ဘေလ်ပေးချေမှုကို ဖြေရှင်းနည်း
Walmart ခရက်ဒစ်ကတ် အကောင့်ဝင်ခြင်းသည် သင့်အကောင့်သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိရန် သင့် Walmart ခရက်ဒစ်ကတ်အကောင့် အကောင့်ဝင်ခြင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို ထည့်သွင်းနိုင်သည့် စာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို အဖွဲ့ဝင်များ၏ အကောင့်များကို ကာကွယ်ရန် ကူညီပေးသည့် လုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်အဖြစ် အများအားဖြင့် ရည်ညွှန်းသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် သင်သည် သင်၏ ခရက်ဒစ်အကောင့်ကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး သင်၏ Walmart ကတ် ဆုလာဘ်များကို ကူပွန်ဖြင့် ထုတ်ယူနိုင်သည်... ဆက်ဖတ်ရန်
သက်သေခံစာရင်းစာအုပ်၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ အဘယ်နည်း
သင်သည် လုပ်ငန်းတစ်ခုကို စတင်ခဲ့ပြီး အရာအားလုံးကို ခြေရာခံနိုင်ရန် ကူညီရန် တစ်စုံတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ အောက်ပါတို့ကို ကျေးဇူးပြု၍ ဖတ်ရှုပါ- သက်သေခံစာရင်းရှင်းတမ်း၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ အဘယ်နည်း။ The Attestation Ledger ၏ ရှင်းလင်းချက် သက်သေခံစာရင်းစာအုပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်။ Cryptoglossary ၏သက်သေစာရင်းစာအုပ်။ သက်သေခံချက်စာရင်း၏အဓိပ္ပါယ်။ သက်သေခံချက်စာရင်းစာအုပ်သည် အထောက်အထားအဖြစ် သက်သေပြနိုင်သော စာရင်းစာအုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
တစ်ရက်လျှင် $100 ရင်းနှီးမြှပ်နှံခြင်းဖြင့် $1,000 ရနိုင်နည်း။
ဒီဝဘ်စာမျက်နှာမှာ တစ်နေ့ကို $100 ရင်းနှီးမြှပ်နှံခြင်းဖြင့် $1,000 ကို သင်ဘယ်လိုရှာနိုင်လဲဆိုတာကို ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်သော ကုန်သည်များ အများစုတွင် အဖြစ်များသော အရာများ၊ ကုန်သွယ်မှု အစီအစဉ် အသိပညာ၊ ကျွန်ုပ်၏ ကုန်သွယ်မှု အစီအစဉ်ကို မည်သို့ အောင်မြင်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သနည်း၊ ကုန်သွယ်မှု ဗျူဟာများ၊ Robo အကြံပေး အရာရှိများ မည်သို့ အလုပ်လုပ်ပုံ အကြောင်းကိုလည်း ဆွေးနွေးပါမည်။ Robo Advisors များ၏ကုန်ကျစရိတ်။ ငါတို့… ဆက်ဖတ်ရန်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ၎င်း၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ
Capital Investment ဆိုတာ ဘာလဲ။ ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အရင်းအနှီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် ၎င်း၏ရေရှည်လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များနှင့် ရည်မှန်းချက်များပြည့်မီစေရန်အတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဝယ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ အရင်းအနှီးအရင်းအနှီးအဖြစ် ရရှိသော ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် အိမ်ခြံမြေ၊ ကုန်ထုတ်အဆောက်အအုံများနှင့် စက်ယန္တရားများ ပါဝင်သည်။ အသုံးပြုသော ရန်ပုံငွေများသည် စံဘဏ်ချေးငွေများနှင့် အကျိုးတူအရင်းအနှီး သဘောတူညီချက်များအပါအဝင် နေရာအမျိုးမျိုးမှ လာနိုင်သည်။ … ဆက်ဖတ်ရန်
အကောင့်ဖွင့်နည်း WALMART ခရက်ဒစ်ကတ် အွန်လိုင်းအကောင့်ကို အကောင့်ဖွင့်နည်း။
ဤဆောင်းပါးတွင်၊ Walmart ခရက်ဒစ်ကတ်သည် မည်သည့်အရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး WALMART ခရက်ဒစ်ကတ် အွန်လိုင်းအကောင့်သို့ လော့ဂ်အင်လုပ်နည်း၊ WALMART ခရက်ဒစ်ကတ်၏ အကျိုးကျေးဇူးများ၊ WALMART ၏အွန်လိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းကို မည်ကဲ့သို့ အကောင့်ဖွင့်ရမည်ကို သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ကုန်ကျစရိတ်၏တန်ဖိုးမှာ အဘယ်နည်း။ ကတ်? WWW.WALMART.COM Walmart ခရက်ဒစ်ကတ်သည် လူများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်... ဆက်ဖတ်ရန်
Amazon Storefront အကြောင်းအချက်များ
Amazon စတိုးဆိုင်မျက်နှာစာသည် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Amazon မှတစ်ဆင့် ထုတ်ကုန်များကို တိုက်ရိုက်ရောင်းချရန် နည်းလမ်းပေးရန်အတွက် 2018 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် စတင်ခဲ့သည်။ Amazon Storefront ဆိုတာဘာလဲ။ Amazon ဆိုင်မျက်နှာစာ ကုန်ကျစရိတ်၊ Amazon စတိုးမျက်နှာစာ တည်ဆောက်ပုံ အဆင့်များ Amazon ဆိုင်မျက်နှာစာမှ ဝယ်ယူနည်း နှင့် ရှာဖွေနည်း... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား ဘောလုံး/ဘောလုံးအကယ်ဒမီ ပညာသင်ဆုများ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုများ, ဂျော့ဘ်
Institutional Investor က ဘယ်သူလဲ။
“Institutional Investor က ဘယ်သူလဲ” ဆိုတာကို လေ့လာပါမယ်။ ထို့အပြင် Institutional Investor၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူပုံစံများ၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အန္တရာယ်များ၊ Institutional Investors vs Retail Investors- ၎င်းတို့အကြား ကွာခြားချက်ကို လေ့လာပါ။ ခေါင်းစဉ်သည် လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဖြစ်နိုင်သည့် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအစား စျေးကွက်တွင် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်သည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအကြောင်း ဆွေးနွေးသည်။ ငါတို့ရည်ညွှန်းသည်… ဆက်ဖတ်ရန်
Atlético Ottawa FC လူငယ်အကယ်ဒမီတွင် မည်သို့ပါဝင်မည်နည်း။
ဤပို့စ်တွင် "Atlético Ottawa FC လူငယ်အကယ်ဒမီသို့ ချိတ်ဆက်နည်း" တွင်၊ Atlético Ottawa FC Academy၊ Atlético Ottawa FC အားကစားကွင်း၊ Atlético Ottawa FC ဥက္ကဌ နှင့် အခြားအရာများစွာအတွက် ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်ကို သင်သိရပါမည်။ Atlético Ottawa FC ၏ လူငယ်အကယ်ဒမီ Atlético Ottawa FC ၏ လူငယ်ကဏ္ဍသည် အနာဂတ် သီးနှံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား ကနေဒါရှိ ဘောလုံး/ဘောလုံးအကယ်ဒမီများ, ဘောလုံး/ဘောလုံးအကယ်ဒမီ ပညာသင်ဆုများ
ဤပို့စ်တွင် "ပစိဖိတ်ဘောလုံးအကယ်ဒမီသို့ ချိတ်ဆက်နည်း" တွင်၊ Pacific FC Academy အတွက် ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်၊ Pacific FC Tryouts၊ Pacific FC အားကစားကွင်း၊ Pacific FC ၏ CEO နှင့် အခြားအရာများစွာကို သင်သိရှိခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ Pacific FC လူငယ်ပရိုဂရမ် Pacific FC ၏ Youth Wing သည် ကစားသမားများ၏ အနာဂတ် သီးနှံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကလေးတွေကို လေ့ကျင့်ပေးဖို့... ဆက်ဖတ်ရန်
FK Radnik Surdulica ဘောလုံးအကယ်ဒမီသို့ မည်သို့ချိတ်ဆက်မည်နည်း။
ဤပို့စ် "FK Radnik Surdulica ဘောလုံးအကယ်ဒမီသို့ ချိတ်ဆက်နည်း" တွင်၊ FK Radnik Surdulica အကယ်ဒမီ၊ FK Radnik Surdulica FC၊ ဆားဘီးယားစူပါလီဂါ၊ FK Radnik Surdulica ကစားသမားနှင့် အခြားအရာများစွာအတွက် ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်ကို သင်သိရပါမည်။ FK Radnik Surdulica FC လူငယ်အကယ်ဒမီ FK Radnik Surdulica ၏ Youth Wing သည် အနာဂတ်လှိုင်းကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနားရှိ ဘောလုံး/ဘောလုံးအကယ်ဒမီများ, ဘောလုံး/ဘောလုံးအကယ်ဒမီ ပညာသင်ဆုများ
FK Sloboda Tuzla FC အကယ်ဒမီ
မင်းက ဘော့စနီးယားဘောလုံးကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ လူငယ်ကစားသမားတစ်ယောက်လား။ ဤပို့စ် "FK Sloboda Tuzla FC" သည်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်။ ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ချက် FK Sloboda၊ FK Sloboda Tuzla FC၊ FK Sloboda Tuzla FC အားကစားကွင်း၊ FK Sloboda Tuzla Fc နည်းပြချုပ်ကိုလည်း ကြည့်ပါ။ FK Sloboda Tuzla FC- လူငယ်အကယ်ဒမီ FK Sloboda Tuzla Youth Wing သည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
Flamengo RJ ဘောလုံးအကယ်ဒမီသို့ဘယ်လိုဝင်ရောက်မလဲ။
ဤပို့စ်တွင် "Flamengo RJ ဘောလုံးအကယ်ဒမီသို့ ချိတ်ဆက်နည်း" တွင်၊ Flamengo RJ Fc Academy၊ Flamengo RJ Youth Academy အားကစားကွင်း၊ Ninho do Urubu၊ Flamengo RJ Fc အားကစားကွင်းနှင့် အခြားအရာများစွာအတွက် ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်အကြောင်း သင်သိရပါမည်။ Flamengo လူငယ်အကယ်ဒမီ၏ Clube de Regatas Clube de Regatas do Flamengo လူငယ်အကယ်ဒမီ (ဘရာဇီးပေါ်တူဂီ- အမျိုးအစားများ… ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား ဘရာဇီးရှိ ဘောလုံး/ဘောလုံးအကယ်ဒမီများ, ဘောလုံး/ဘောလုံးအကယ်ဒမီ ပညာသင်ဆုများ
Juventude FC Academy သို့ ချိတ်ဆက်ခြင်း။
သင် Brazil တွင် Academy တစ်ခုသို့တက်ရောက်ရန်ရှာဖွေနေပါသလား။ ဤပို့စ်သည် "Juventude FC Academy သို့ဝင်ရောက်ခြင်း" ၏အထောက်အကူဖြစ်ကြောင်း သင်တွေ့လိမ့်မည်။ Requirement Juventude Academy ၊ Juventude Youth Academy ၊ Juventude FC နှင့် Juventude Fc အားကစားကွင်းသို့ ဝင်ရောက်နည်းတို့ကိုလည်း ကြည့်ရှုပါ။ Juventude FC- လူငယ်အကယ်ဒမီ Juventude's Youth Wing သည် အနာဂတ် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို မျိုးဆက်သစ်များ ပြုစုပျိုးထောင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ … ဆက်ဖတ်ရန်
သင် ဘရာဇီးတွင် အကယ်ဒမီတစ်ခုအတွက် ကစားလိုပါသလား။ ဤပို့စ် "Ceara Football Academy" သည် စတင်ရန် နေရာကောင်းဖြစ်သည်။ လိုအပ်ချက် Ceara Academy၊ Ceara FC၊ Ceara FC League နှင့် Ceara Fc Head Coach တို့ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ Ceara FC - လူငယ်အကယ်ဒမီ Ceara's Youth Wing သည် အနာဂတ် မျိုးဆက်သစ် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို ပြုစုပျိုးထောင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ … ဆက်ဖတ်ရန်
Coritiba FC လူငယ်အကယ်ဒမီ မှတ်ပုံတင်ခြင်း လိုအပ်ချက်
ဤပို့စ် "Coritiba FC လူငယ်အကယ်ဒမီ မှတ်ပုံတင်ခြင်း လိုအပ်ချက်" တွင်၊ Coritiba Fc Academy၊ နည်းပြချုပ် Coritiba Fc၊ Coritiba Fc အားကစားကွင်း နှင့် အခြားများစွာသော ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်များအကြောင်း သင်သိရပါမည်။ Coritiba Coritiba ဘောလုံးအကယ်ဒမီရှိ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစနစ် လူငယ်အသင်းများ၏ စွမ်းရည်များသည် ကျော်ကြားသော ဘောလုံးအသင်းတစ်သင်း၏ အဖိုးတန်ဆုံးအပိုင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှိခြင်း… ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား ဘရာဇီးရှိ ဘောလုံး/ဘောလုံးအကယ်ဒမီများ
Goiás Esporte Clube ဘောလုံးအကယ်ဒမီသို့ မည်သို့ချိတ်ဆက်မည်နည်း။
ဤပို့စ် "Goiás Esporte Clube Football Academy ကို ဘယ်လို Join ရမလဲ" တွင်၊ Goias Fc Academy၊ Goias Fc Manager၊ Goias Fc အားကစားကွင်းများနှင့် အခြားအရာများစွာအတွက် ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်ကို သင် သိခွင့်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Goias FC လူငယ်အကယ်ဒမီ ကလပ်၏လူငယ်တောင်ပံသည် Goiás Esporte Clube တွင် အနာဂတ်တွင် အကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်ထွန်းစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ လေ့ကျင့်ရန်… ဆက်ဖတ်ရန်
Forge FC Academy သို့ဝင်ရောက်ခြင်း။
ငယ်ရွယ်တဲ့ ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကနေဒါမှာ ကစားဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါသလား။ “Forge FC Academy တွင်ပါဝင်ခြင်း” ကိုလေ့လာပါ။ Entering Requirement Forge FC Academy၊ Forge FC နည်းပြချုပ်၊ Forge FC အားကစားကွင်း၊ Forge FC ဥက္ကဋ္ဌ ကိုလည်း စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ Forge FC - လူငယ်အကယ်ဒမီ Forge FC Youth Wing သည် အနာဂတ် မျိုးဆက်သစ် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို ပြုစုပျိုးထောင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ သို့သော်… ဆက်ဖတ်ရန်
Shanghai Shenhua FC လူငယ်အကယ်ဒမီ စမ်းသပ်မှုများ
ဤပို့စ်တွင် "Shanghai Shenhua FC Youth Academy Trials" တွင်၊ Shanghai Shenhua FC Academy အတွက် မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ချက်များ၊ Shanghai Shenhua FC မန်နေဂျာ၊ Shanghai Shenhua FC အားကစားကွင်းနှင့် Shanghai Shenhua FC လူငယ်အကယ်ဒမီတွင် မည်သို့ပါဝင်ရမည်ကို သိရပါမည်။ Shanghai Shenhua FC လူငယ်အကယ်ဒမီ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှန်ဟိုင်းလူငယ်ဘောလုံးအကယ်ဒမီကို 2012 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့၍ ... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား တရုတ်နိုင်ငံရှိ ဘောလုံး/ဘောလုံးအကယ်ဒမီများ, ဘောလုံး/ဘောလုံးအကယ်ဒမီ ပညာသင်ဆုများ
Universidad de Chile FC လူငယ်အကယ်ဒမီ
ချီလီတွင် အကယ်ဒမီတစ်ခုအတွက် ကစားလိုပါသလား။ ဤပို့စ်ကို “Universidad de Chile FC လူငယ်အကယ်ဒမီ” ကိုကြည့်ပါ။ Universidad de Chile Academy၊ Universidad de Chile FC အားကစားကွင်း၊ Universidad de Chile FC မန်နေဂျာ၊ Universidad de Chile FC သို့ ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ချက်များကို ကြည့်ပါ။ Universidad de Chile FC - လူငယ်အကယ်ဒမီ Universidad de Chile FC လူငယ်... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား ချီလီရှိ ဘောလုံး/ဘောလုံးအကယ်ဒမီများ, ဘောလုံး/ဘောလုံးအကယ်ဒမီ ပညာသင်ဆုများ
Deportes Magallanes FC လူငယ်အကယ်ဒမီ မှတ်ပုံတင်ခြင်း လိုအပ်ချက်
ဤပို့စ် "Deportes Magallanes FC လူငယ်အကယ်ဒမီ မှတ်ပုံတင်ခြင်း လိုအပ်ချက်" တွင်၊ Deportes Magallanes အကယ်ဒမီ၏ ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်၊ Deportes Magallanes FC၊ Chilean Primera división၊ Deportes Magallanes အကယ်ဒမီတွင် မည်သို့ပါဝင်ရမည်၊ နှင့် အခြားအရာများစွာကို သင်သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Deportes Magallanes FC လူငယ်အကယ်ဒမီက ကလေးတွေကို လေ့ကျင့်ပေးဖို့၊ ဒါကြောင့် ကလပ်က ပိုက်ဆံအများကြီးသုံးတယ်... ဆက်ဖတ်ရန်
FK Leotar Youth Academy ကို ဘယ်လိုဝင်ရမလဲ
ဤပို့စ်တွင် "FK Leotar Youth Academy သို့ဝင်ရောက်နည်း" တွင်၊ FK Leotar Academy၊ FK Leotar FC၊ FK Leotar FC လိဂ်နှင့် FK Leotar Academy သို့ဝင်ရောက်နည်းနှင့် အခြားအရာများစွာအတွက် ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်များကို သင်သိရပါမည်။ FK Leotar Youth Academy FK Leotar's Youth Wing သည် အနာဂတ်သီးနှံကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ရန် ရည်စူးထားသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
NK Široki Brijeg ဘောလုံးအကယ်ဒမီသို့ မည်သို့ချိတ်ဆက်မည်နည်း။
ဤပို့စ်တွင် "NK Široki Brijeg ဘောလုံးအကယ်ဒမီသို့ ချိတ်ဆက်နည်း" တွင်၊ NK Široki Brijeg Academy၊ NK Široki Brijeg FC၊ NK Široki Brijeg FC အားကစားကွင်း၊ NK Široki Brijeg FC မန်နေဂျာနှင့် အခြားအရာများအတွက် ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်ကို သင်သိရပါမည်။ NK Široki Brijeg FC ၏လူငယ်အကယ်ဒမီ ကလပ်၏လူငယ်တောင်ပံသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်သည်... ဆက်ဖတ်ရန်
FK Željezničar လူငယ်အကယ်ဒမီတွင် မည်သို့ပါဝင်မည်နည်း။
ဤပို့စ် "FK Željezničar Youth Academy" ကို ဘယ်လို Join ရမလဲ၊ FK Željezničar Academy၊ FK Željezničar FC၊ FK Željezničar အားကစားကွင်း၊ FK Željezničar Manager နှင့် အခြားများစွာသော ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်များကို သင် သိခွင့်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Željezničar Youth Academy (FK Željezničar) FK Željezničar's Youth Wing သည် ပညာရှင်များ၏ အနာဂတ်သီးနှံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကလေးတွေကို လေ့ကျင့်ပေးဖို့... ဆက်ဖတ်ရန်
Reims Fc Academy ကို ဘယ်လိုဝင်မလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် "Reims Fc Academy ကိုဘယ်လို Join ရမလဲ" ကိုလေ့လာပါမည်။ ထို့အပြင် Reims Fc Academy တွင် မည်သို့ပါဝင်ရမည်၊ Reims Fc Academy၊ Reims ဘောလုံးအသင်း၊ Reims stadium စသည်တို့တွင် မည်သို့စာရင်းသွင်းရမည်ကို ကြည့်ပါ။ ယခု Reims Fc Academy တွင် မည်သို့ပါဝင်ရမည်ကို ကြည့်ကြပါစို့။ Stade de Reims FC လူငယ်အကယ်ဒမီအကြောင်း နိဒါန်းသင်သည် လူငယ်တစ်ယောက်လား။ ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား ပြင်သစ်ဘောလုံး/ဘောလုံးအကယ်ဒမီများ, ဘောလုံး/ဘောလုံးအကယ်ဒမီ ပညာသင်ဆုများ
Sampdoria Fc League Academy ကို ဘယ်လိုဝင်ရမလဲ
ကျွန်ုပ်တို့သည် "Sampdoria Fc League Academy ကိုမည်သို့ Join ရမည်" ကို လေ့လာပါမည်။ Sampdoria Academy Players များ၊ Sampdoria Academy မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Sampdoria Academy ကစားသမားများ၊ Sampdoria Academy ထဲသို့ လိုအပ်ချက်များဝင်ရောက်ခြင်း အစရှိသည်တို့ကို လေ့လာပါ၊ ယခု Sampdoria Fc League Academy ကို မည်သို့ပါဝင်ရမည်ကို ဆွေးနွေးကြပါစို့။ Sampdoria Youth Tryouts အကြောင်း Sampdoria ၏ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကို Primavera 1 အဖွဲ့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ … ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား ဘောလုံး/ဘောလုံးအကယ်ဒမီ ပညာသင်ဆုများ
Espanyol Fc Academy ကို ဘယ်လိုဝင်ရမလဲ
ကျွန်ုပ်တို့သည် "Espanyol Fc Academy ကိုမည်သို့ဝင်ရောက်ရမည်" ကို ဆွေးနွေးပါမည်။ ထို့အပြင် Espanyol Fc Academy တွင် စာရင်းသွင်းရန်၊ Espanyol Fc Academy၊ Espanyol လူငယ်အကယ်ဒမီ၊ Espanyol အကယ်ဒမီလေ့ကျင့်ရေးကွင်းစသည်ဖြင့် RCD Espanyol လူငယ်အကယ်ဒမီ-Cantera RCD Espanyol သည် စပိန်ရှိ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အကယ်ဒမီစနစ်အား The Academy ဟုခေါ်သည်... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား စပိန်ရှိ ဘောလုံး/ဘောလုံးအကယ်ဒမီများ, ဘောလုံး/ဘောလုံးအကယ်ဒမီ ပညာသင်ဆုများ
Genoa Fc League Academy ကိုဘယ်လိုဝင်ရမလဲ
ကျွန်ုပ်တို့သည် "Genoa Fc League Academy ကိုဘယ်လို Join ရမလဲ" ကိုလေ့လာပါမည်။ ထို့နောက် ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများ ၊ Genoa Fc အကယ်ဒမီ၊ Genoa Football Club သို့ဝင်ရောက်နည်း၊ Genoa Fc အကယ်ဒမီလျှောက်ထားရန် လိုအပ်ချက်များ၊ Genoa နွေရာသီစခန်းချနည်း စသည်ဖြင့်၊ ကလပ်၏ဉာဏ်ပညာအရ ဘောလုံးဝါသနာပါသော လူငယ်များကို ခေါ်ယူရန် ကြားခံတစ်ခုအဖြစ် တွေးတောခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား ဘောလုံး/ဘောလုံးအကယ်ဒမီများ အီတလီ, ဘောလုံး/ဘောလုံးအကယ်ဒမီ ပညာသင်ဆုများ
စာမျက်နှာ1 စာမျက်နှာ2 ... စာမျက်နှာ29 နောက်တစ်ခု →
ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနားရှိ ဘောလုံး/ဘောလုံးအကယ်ဒမီများ
အမေးများသောမေးခွန်းများ - မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
© 2022 Soccerspen •တည်ဆောက်ထားသည် GeneratePress